Arts & Humanities » လတစ်စင်း ထွက်ပါပေါ့လေ	23
.စာပေနဲ့ တရားဝင်ချစ်သူတွေ . ဖြစ်သွားပေမယ့် . . . .
.စိတ်တေလေ စေရာအတိုင်းသာ . . . . ။ .၀င်ပြုံးမြင့်။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ဒီရွာထဲက လူတွေ မျှစ်ကြော်စာအုပ်ကို မဖတ်ကြမှန်း သိပါတယ်။ အာ့ကြောင့် ဖတ်ပါလို့ အတင်းကာရော မတိုက်တွန်းရဲပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဆွဲဆောင်မှုလေးတော့ လုပ်ချင်တာပေါ့။ ဒီလိုလေ။ ဒီရွာကြီးက အစားပုပ်ရွာဆိုတော့ .. စာအုပ်ကို ဟင်းတစ်ခွက်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြချင်ပါတယ်။ ဒါမှ စလုံးက လူမိုက်ကြီးတွေရယ်၊ ဟောင်ကောင်က လူမိုက်ကြီးတွေရယ် စိတ်လေး ဘာလေး ၀င်စားလာအောင်။
ဦးကျောက်ခဲ says: ဖတ်ချင်တာပေါ့ ဒေါ်မျှစ်ကြော်ရယ်…
ဇီဇီခင်ဇော် says: လက်ဆောင်ရမှ ဖတ်မယ် လို့။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ငါးသလောက်ပေါင်း ချန်ထားပေးမယ် ငါ့ညီမ။ ကျောက်စ်အတွက်တော့ မချန်တော့ဘူး။ အလကား သူဖတ်မှာလည်း ဟုတ်ဘူး။ မနှင်းကတော့ ဖတ်ချင်ဖတ်နိုင်တယ်။ ဒီတော့ ကျောက်စ် သူ့ဟာသူ ငါးသလောက်ပေါင်း ရှာပစေ။
ဦးကျောက်ခဲ says: လူတန်းစားခွဲတယ်… မကျေနပ်ဘူး… ဒါဗျဲ…
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: မပြုံးရေ အညွှန်းနဲ့ကိုဖတ်ချင်လာပြီ
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ဘာသာပြန်စာပေတွေက စိတ်ပျက်စရာသိပ်ကောင်းတယ် လေးပေါက်ရေ။ ဘာသာပြန်တာကို အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ နှစ်ဘာသာ ကျွမ်းကျင်ရမယ်ဆိုတဲ့ ယေဘုယျ သဘောထားက သတ်ထားတာ။ ဘာသာပြန်တာ သီးသန့်ပါရမီ။ မြန်မာပြည်ဖွား ကမ္ဘာကျော်စာရေးဆရာတွေ ဒေါက်တာသန့်မြင့်ဦးတို့၊ ၀င်ဒီလောရုံတို့ မြန်မာလို ကောင်းကောင်းတတ်ပါတယ်။ သူတို့ရေးထားတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာကို သူတို့ ဖာသာ မြန်မာမပြန်ပါဘူး။ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ နှစ်ဘာသာကျွမ်းကျင်ရင် ဘာသာပြန်လို့ ရပြီဆိုတဲ့ အတွေးက စပြီး မှားနေတာ။ ဥပမာဆိုရရင် ခြေထောက်ရှိတဲ့လူတိုင်း ဘောလုံးကန်တတ်ပေမယ့် လက်ရွေးစဉ်ဖြစ်ဖို့ကတော့ ပါရမီလိုတယ်။ မှော်အောင်ဖို့ လိုတယ်။ ဘာသာပြန်တာဟာ ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှု ထက် သီးသန့်မှော်တစ်ခု။ ကိုယ်တိုင်ရေးသမားတွေ ဘာသာထပြန်ရင် ဖတ်လို့ မရဘူး။ စိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ်။ ဒီရွာထဲမှာ အဲလို မှော်အောင်ထားတဲ့လူ တစ်ယောက်ရှိတယ်။ ကိုဘလှိုင်လေ။
လုံမလေးမွန်မွန် says: အမေစုကတော့ နှစ်ဘာသာစလုံး သူပဲရေးတယ်လားလို့.. မြန်မာပြည်က ပေးစာများ စာအုပ်လေ…
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ဟုတ်တယ် အမေစုက ၂ဘာသာစလုံးသူရေးတာ။ ဒါပေမယ့် မတူဘူးညီမ။ ဘာသာပြန်တယ်ဆိုတာ လွယ်တယ်။ ရသ မဟုတ်ရင်ပေါ့။ ဖန်တီးမှု ပါတဲ့ ရသစာအုပ်ကို ဘာသာပြန်တဲ့အခါ ကိုယ့်စာကိုယ် မပြန်နိုင်ပါဘူး။
မြစပဲရိုး says: မင်းသမီး က ရှမ်းစော်ဘွားသမီးလား ပြုံး။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .အမလတ်အတွက် စာအုပ်လက်ဆောင်ကို အာတီဒုံဆီ ပို့ထားပေးမယ်နော် သိလား။ အထက်က ကဗျာလေးကတော့ ကျမရဲ့ ဘ၀ဖြစ်စဉ်။ စာအုပ်နဲ့ မဆိုင်ဘူး။
မြစပဲရိုး says: ညီမပြုံး – သတိတရ အမှတ်တရ စကားလေး အတွက် ကြည်နူးမိသွားပါတယ်။
ဘူသူ့ ကို အချစ်ဆုံးတုန်း။ :-)))
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ဝေဠု ထိ ဓားကြည့်
မင်း ခန့် ကျော် says: ဖတ်ရဖို့ကြိုးစားပါ့မယ်။
ဘာသာပြန်စာအုပ်ဖတ်ရတာ ရသတမျိုးရပါတယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1374
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .စာအုပ်ဝယ်လို့ ရပါ့မလား။ မအူက အသိက ရန်ကုန်တက်ဝယ်တော့ လူတွေကြိတ်ကြိတ်တိုးပြီး ၀ယ်မရဘူး။ စိတ်ကူးချိုချို စာအုပ်ဈေးပွဲတော်မှာလေ။ အလှူ ခံတွေကလည်း အများကြီးတဲ့။ စာအုပ် ဘယ်လိုဝယ်မလဲ။
ဦးကြောင်ကြီး says: လဓဇင်းထွက်
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ကကြောင် ငါးသလောက်ပေါင်းကို လက်ဖက်နဲ့ သရက်နဲ့ စားရမယ်လို့ ဆိုလိုတာလား။
kai says: ကျုပ်..ငယ်ငယ်ကဆို..စာဖတ်အရမ်းမြန်တာ..
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .မျှစ်ရောက်တဲ့ ဒုက္ခက အဲဒါပဲ သဂျီး။ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို သူများ ပြန်ပြီးပြီလား မပြန်ရသေးဘူးလား လုံးဝ မသိရဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဘာသာပြန်လောကက ထင်သလို လုပ်နေကြတယ်။ အပေါစားအဆင့်ရောက် နေတယ်။ ရေးချင်သလိုရေး၊ လုပ်ချင်သလိုလုပ်၊ ထူးထူးခြားခြား ပေါက်ထွက်သွားအောင် မလုပ်နိုင်ကြဘူး။ အဲဒီအခါ စာအုပ်တစ်အုပ်ဟာ နာမည်ထွက်မလာတော့ဘူး။ အဲဒီတော့ စာအုပ်ပြန်ထားပြီးလား မပြန်ရသေးဘူးလား မသိတော့ဘူး။ ဗုံးဗောလအော လုပ်နေကြလို့။ အောင်မြင်တာလဲ မှုတ်ဘူး။ အရင်က စာပေစိစစ်ရေးရှိလို့ ထားပါတော့။
black chaw says: လေးစားဂုဏ်ယူမိပါတယ် မပြုံးရေ…။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ဟိုလေ ရွာထဲက လူကြီးတွေအတွက် စာအုပ်လက်ဆောင်ပေးထားတဲ့ထဲမှာ ဦးဘက် လည်းပါပါတယ်နော်။ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ဦးဘက်လည်း မငယ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါ ဟီး ။
အောင် မိုးသူ says: ရှာဝယ်လိုက်ဦးမယ်
၀င့်ပြုံးမြင့် says: . အ ခု ဈေးပွဲတော်မှာ အမစာအုပ်တွေ အကုန်လုံး လုပ်ချင်သလိုလုပ်နေတယ်။ ပထမအကြိမ်ကိုပဲ ဒုတိယတစ်ခါ ထပ်ထုတ်လိုက်တာပေါ့လေ။ စာရွက်အညံ့စားတွေနဲ့ ပြန်ထုတ်နေတာ။ အမ မသိဘူး။ သူများပြောမှ သိတာ။ ဒီလိုပါပဲလေ။